အပေါ် Posted 11 / 19 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
Upjohn ကစတင်လွှင့်တင်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်အတိတ်များအတွက် Depo-testosterone ၏ထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ testosterone Cypionate အများအပြားကာယဗလနှင့်အားကစားသမားများအားဖြင့် testosterone enanthate မှပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးကိုဆင်တူပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ခံရသောထက်ဝက်-ဘဝတွေကိုကွဲပြားခြားနားပါသည်။
testosterone Cypionate ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်အသုံးပြုမှုတစ်ခုခင်းကျင်းထားပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်က applications များရဲ့ဖြစ်ကြသည်။
testosterone Cypionate အန်ဒရိုဂျင်ကိုအစားထိုးကုထုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ လောလောဆယ်ကြောင့် (ဝယ်ယူသို့မဟုတ်မွေးရာပါဖြစ်စေ) hypogonadotropic နှင့်မူလတန်း hypogonadism ၏ကုသမှုများအတွက် FDA ကအတည်ပြုသည်။ ဤအခြေအနေမှအထီးလုံလောက်သောလိင်ဟော်မုန်း testosterone ထုတ်လုပ်နိုင်မဟုတျပါမထွက်ရတဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
သငျသညျပြဿနာများကြောင့်သင်ဤပြင်ပေးဖို့ဟော်မုန်းကုသမှုနှင့်ဆေးဝါးများခံယူစေခြင်းငှါ testosterone Cypionate ၏အသုံးပြုမှုကိုရန်သင့်မိတ်ဖက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်မူးယစ်ဆေးမြင့်မားသော doses- အတွက်အသုံးပြုသည်တစ်ချိန်ကလူသားရဲ့သုက်ပိုးအတွက်တစ်ဦးကလျှော့ချရေးရေတွက်။ ထက်အခြားအသင်တို့သည်လည်း (အေအာရ်တီ) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကူညီမျိုးပွားနည်းပညာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှုအခညျြးနှီးဖြစ်ဟန်ရှိလျှင်, သင်လိင်ရှိသည်သို့မဟုတ် fertilization ဖြစ်ပျက်ဖွယ်ရှိသည်လာသောအခါလိင်ရှိသည်သောအကြိမ်အရေအတွက်ကတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ယင်းသုက်ပိုးလှုပ်ရှားမှုကိုတားဆီးနိုင်ကြောင်းစက်ဆီချောဆီတွေကိုရှောင်ကြဉ်ဒီစီမံခန့်ခွဲခြင်း၏အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
testosterone cypionate သောက်သုံးသောအချို့သောအချက်များကလွှမ်းမိုးနေသည်။ ဤအရာများသည်;
သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်ရဲ့ကြွက်သားသို့ထိုးသွင်းခံရဖို့အများဆုံးသောက်သုံးသောတိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့အ 400 မီလီဂရမ်ဖြစ်သင့်သည်။
အဆိုပါ testosterone Cypionate Cycle ဆယ်နှစ်အပတ်ကမှတပတ် 200 ကနေအပတ်စဉ် 1mg ရပါမည်။ သငျသညျ, သို့သော်, သင်သောက်သုံးသောအပြောင်းအလဲများကိုထို့နောက်အခြားမည်သည့် Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူ testosterone Cypionate stacking လျှင်သတိပြုပါသင့်ပါတယ်။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်လား
အမှု၌သင်တို့youâ€™သင့်ခန္ဓာကိုယ်၌ဤဆေး၏အန္တရာယ်အဆင့်ဆင့်ရှိခြင်းလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်တဲ့ testosterone အလွန်အကျွံသုံးစွဲရှိသည်။ ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေပါဝင်နိုင်ပါသည်:
1. 5mg / ml မှာ 20ml မှစမ်းသပ် Cypionate 250gram ပြောင်းလဲခြင်း
အဆိုပါ AASraw.com က်ဘ်ဆိုက်ရှာရန်
အဘယ်အရာကိုပိုပြီးင်သငျသညျအဆီသိုလှောင်မှုကိုရှိခြင်း၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲသင်ကြိုက်နှစ်သက်ဘာမှကိုမစားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းရဦးမည်, သင်ကသင်၏စံပြခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုအောင်မြင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်အမြဲခစျြတျောမူပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဖို့အနည်းငယ်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
8830 Views စာ
Sunifiram ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)	သငျသညျ DMAA ယူမီကိုသိရန်ရှိသည် 10 အမှုအရာ